Showing १११-१२० of २,८२६ items.
सुनसरीकोमा संक्रमितको संख्या बढ्दै, हरिनगर क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा थप १२ संक्रमित
भण्टाबारी । सुनसरीको हरिनगर गाउँपालीका क्षेत्रको क्वारेन्टाइनमा बसेका थप १२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमित हुने १२ जना पुरुष रहेको र उनीहरूको सबै हरिनगर र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालीका क्षेत्रका व्यक्तिहरु भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । हरिनगर गाउँपालीकाको भुटाहा जेनेरल हस्पिटलमा बसेका मध्ये स्वास्थ्यकर्मीको टोलिले केही दिनअघि १९ जनाको स्वाव परिक्षण गरेकोमा १२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । संक्रमण पुष्टि हुने व्यक्तिहरु भारतको विभिन्न स्थानबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । उनीहरूलाई थप उपचारको लागि पठाउने तयारी भएको बताइएको छ ।
कोरोनाबाट थप एक युवाको मृत्यु
धरान । भारतबाट आएका सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका–१ हाँसेका २० वर्षीय युवकको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ । योसँग नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ११ जनाको मृत्यु भएको छ । जेठ ७ गते नेपाल फर्किएका उनको पहिलो पटक आरडिटी गरिएको थियो । आरटिडीमा नेगेटिभ देखिएको थियो । नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । १४ दिनपछि पुनः आरडिटी टेष्ट गर्दा नेगेटिभ नै आएपछि होम क्वारेन्टिनको लागि फर्म फरेर घर जेठ २१ गते घर पठाइएको थियो । तर, घर गएको त्यहीँ रात उनको मृत्यु भएको हो । बिहीबार स्वाब संकलन गरेर पीसीआरका लागि टेष्ट गर्न पठाउँदा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । उनक
वराहक्षेत्र–५ र ८ नम्बरका तीन जना कोरोना संक्रमित
कालाबञ्जार । वराहक्षेत्रको महेन्द्र माविको क्वारेन्टिनमा रहेका ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जेठ ११ गते भारतबाट आएका उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो । विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको वराहक्षेत्र नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका निरीक्षक उमेश मेहताले जानकारी दिए । सुनसरीमा १६ जना कोरोना संक्रमित पुगेका छन् । संक्रमित देखिने मध्ये वराहक्षेत्र–५ का १९ र २६ वर्षका पुरुष छन् भने ८ नम्बर वडाका २० वर्षीय एक पुरुष छन् । उनीहरूसहित ३० जनाको गत मंगलबार स्वाब संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । उनीहरूलाई मोरङको गोठगा
कोरोनामुक्त भएका धनकुटाका व्यक्तिलाई स्वागत
धनकुटा । कोभिड अस्पताल विराटनगरबाट कोरोना मुक्त भएर आएकालाई बिहीबार साँझ धनकुटामा स्वागत गरिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनकुटा शाखाका सभापति हरि नाम्दुङले ७ जनालाई फूलको गुच्छा दिएर स्वागत गरे । सभापति राईले धनकुटाका संक्रमित साथीहरूलाई रेडक्रसको एम्बुलेन्समा राखेर पु¥याइएको र पुनः स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । पहिलो पटक धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत ४ जना स्वनास्थ्यकर्मी, धनकुटामा कार्यरत संक्रमण पुष्टि भएका अन्य २ सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका परिवार गरेर ७ जना डिस्चार्ज भएको धनकुटा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पुजन विश्वकर्माले बताए । धनकुटामा संक्रमण पुष्
धरानबाट २१ जना संक्रमित घर फर्किए
धरान / धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वेडमा रहेका २१ जना संक्रमितहरु घर फर्केका छन् । केही दिन अगाडी १८ जना र आज ३ जना निको भएर घर फर्केको प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साहले जानकारी दिए । १५ दैखि ४५ बर्षका तीन जना झापाका विमारी घर फर्केका हुन । यस अघि झापाका १७ र एकजना धरानकी महिलालाई घर पठाइएको थियो । उनीहरुको दुई पटक पिसिआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आए पछि घर पठाइएको हो । हाल प्रतिष्ठानमा अझै ९० जना रहेका छन् ।
सुनसरीको भोक्राहामा थप दुईजना कोरोना संक्रमित
भण्टाबारी । सुनसरीको भोक्रहा नरसिंह गाउँपालिका वार्ड नम्बर ८ स्थित रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका थप दुईजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भोक्रा नरसिंह गाउँपालिका वार्ड नम्बर ८ स्थित रहेको मदरसामा संचालनमा ल्याइएको होल्डिङ सेन्टरमा बसेका थप दुईजना पुरूषमा बिहीबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा एकजना मोरङका व्यक्ति हुन भने अर्का व्यक्ति ताप्लेजुङका व्यक्ति रहेकोे बताइएको छ । भारतबाट आएका उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकोमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । सेन्टरमा बसेका सातजना व्यक्तिमा बुधबार कोरोना संक्रमण पोजेटिभ पाइएको थियो । सो सेन्टरमा १०२ जना बसेमा ७८ जनाको
एकै दिन थपिए ३३४ कोरोना संक्रमित
धरान । आज ३३४ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न जिल्लामा ३३४ जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले ३३४ जना थपिएसँगै कुल संख्या २ हजार ६३४ पुगेको जनाए । हालसम्म २९० जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
उर्लाबारी / सामुदायिक बिकास मञ्च उर्लाबारीले संस्थाको २३ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहिबार आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा ९२ जनाले रक्तदान गरेका छन । उर्लाबारी–६ स्थित महारुद्र शिवालय मंन्दिरको सभाहलमा संस्थाका अध्यक्ष ढुण्डुराज भट्टराईको अध्यक्षता तथा उर्लाबारी नगरपालिकाका वडा नं.–६ का वडाध्यक्ष चिन्तामणी पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको रक्तदानमा स्थानिय २७ महिलासहित ९२ जनाले रक्तदान गरेका संस्थाका सह–सचिव प्रभु दिलुङछा राईले बताएका छन । सामाजिक क्षेत्रमा नगरमा अग्रणी कार्य गर्दै आएको उक्त संस्थाले रक्तदान, सरसफाई, विपदमा परेकालाई सहयोग, धर्म संस्कृतिको जगेर्ना, सडक वत्तीको